प्रयोग भइसकेको क’ण्ड’म बटुलेर महिलाले ग’र्थिन यस्तो काम, प्रहरी प’र्यो च’कित्”हेर्नुस् !! - NepalNews-24
कसैका अनौठा शोख पनि हुन्छन् । जसले मानिसलाई अचम्म बनाउँछ । पैसा कमाउन एक जना महिलाले अपनाएको उपायले प्रहरीलाई पनि चकित् बनाएको छ । उनले केही ब्यक्तिको सहयोगमा प्रयोग भइसकेको क ण्ड म भेला पारेर पुन बेच्ने गरेकी थिइन् । दक्षिण पूर्वी एशियाली देश भियतनाममा एक महिलाले यस्तो काम गर्ने गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । **भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
प्रहरीले प्रयोगमा आइसकेका ३ लाख २५ हजार क ण्ड म बरामद गरेको छ । यी क न्ड मलाई पानीमा धोएर नयाँ क ण्ड म भन्दै बेच्ने गरिएको थियो । यो क ण्ड म देशको दक्षिणी प्रानत बिन्ह दुओङस्थित एक गोदाममा एक दर्जन ब्यागमा भरेर राखिएको थियो । भियतनामको सरकारी टिभी च्यानल विटीभीको रिपोर्टअनुसार प्रहरीले क न्ड मले भरिएका यी ब्याग सहित महिलालाई पक्राउ गरेको हो ।
जसको वजन ३ सय ६० किलो छ । यस गोदामका मालिकले उनले अज्ञात ब्यक्तिवाट प्रयोगमा आइसकेका क ण्ड म किनेर फेरी बेच्ने गरेका थिए । त्यसलाई धोइपखाली गरेर बेच्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानवाट खुलेको छ । पक्राउ परेकी एक महिलाले दिएको बयानअनुसार प्रयोग भइसकेका यी क ण्ड मलाई पहिलो उ म्लि एको पानीमा हा ल्ने गरिन्थ्यों, त्यसपछि सुकाइन्थ्यों ।
महिलाका अनुसार त्यसपछि यस क ण्ड मलाई काठको लि ङ्गमा राखेर फेरि पुरानै आकार दिएर नयाँ जस्तै बनाइन्थ्यो । त्यसपछि फेरि प्याकेटमा भरेर बेच्ने गरिन्थ्यों । टिभी च्यानलका अनुसार प्रयोगमा आएका यस्ता कति क ण्ड म फेरि बिक्री भयो भन्ने विषय अहिले खुलेको छैन । महिलाका अनुसार उनले जति किलो क ण्ड म बनाउथिंन्, त्यहीअनुसार पैसा आउथ्यों । **भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
Previous articleआकाशबाट खसे १५ सयभन्दा बढी चरा: फेरि आएको हो नयाँ सं’कट?
Next article७६ जना युवतीसँग विवाह, २०० जना युवती बेच्ने युवक प क्राउ